Ngenkathi ingane ingazi kahle inkulumo, ukukhala kuyindlela kuphela yokuheha. Izinyembezi zomuntu omdala ziyisihlungu nesipiliyoni, izinyembezi zomntwana zingendlela yokuxhumana yemvelo. Abazali kancane kancane bajwayele ukuthi lesi simo sijwayelekile futhi akusilo neze esabekayo, kodwa balahleka uma ingane iqala ukukhala ephusheni. Kungani lokhu kwenzeka?
Ukulala yisimo esikhethekile somzimba esifeza imisebenzi emibili eyinhloko: ukugcwalisa izindleko zamandla nokulungisa lokho umntwana akufundile ngesikhathi sokuvuka. Ukulala okugcwele nakho kuyisimo sokuthuthukiswa kwengane, kanye nesibonakaliso sempilo yakhe engokwengqondo nengokwengqondo. Ngakho-ke, abazali bakhathazekile kakhulu uma ukuphumula kwengane kuphazanyiswa, futhi ngisho nangaphezulu uma umntwana ekhala.
Isilinganiso sokulala kwengane kuze kufike ezinyangeni eziyisithupha sisukela emahoreni angu-18 kuya ku-14-16 ngosuku. Kodwa ezinyangeni zokuqala ingane ingakwazi ukuvuka njalo amahora 3-4, futhi akukho ukukhubazeka kuyo: umbuso ozinzile wosuku awuzange uthuthukiswe, ngokuvamile kuvame ukudideka kwemini nobusuku.
Ingane ivukela ngokuvamile ngenxa yokuzwa yilamba, ingahambi kahle noma imane ibonise ukukhanya kwendabuko evamile. Ngakho-ke, omama kudingeka babe nokubekezela futhi bakhumbule ukuthi ukulala kuyinto umsebenzi reflex umsebenzi, okusho ukuthi ukuthuthukiswa umkhuba othile wokuthatha umhlalaphansi kuze ubuthongo ebusuku futhi ukugcinwa kokubusa ezintathu "T" (efudumele, emnyama ethule) kuyosiza ukubhekana nale nkinga.
Ngabe ingane ingakwazi ukulala ubusuku bonke ngaphandle kokuvuka? Lokhu kuwukuphela komuntu, kodwa iningi lezinyanga ezinyangeni eziyisithupha alikwazi ukuphazamisa ukulala ebusuku ngamahora angu-10. Ingane ayidingi ukudumaza noma ukulala ngokucindezela. Ungakwazi ukubhekana nomsebenzi wakhe wedwa kalula, uma isikhathi esithile abazali bebamba izimpawu zokulala: ingane igxuma, ihlanganisa noma igubungele amehlo, idonsa ithoyizi. Uma kukhona ukukhathala, isikhathi sokulala kwakhe sivame ukufika kumaminithi angu-20. Uma ungenzi izimo zokulala (ukukhanya okukhanyayo, umsindo, ukuba khona kwazihambi), lokhu kungabangela isimo lapho izinsana zikhala.
Inqubo efanayo yokulala iyoba nzima, futhi ukuphumula ebusuku kuphukile ngenxa yokwehliswa kwengane. Ukuqonda ukuthi kungani lokhu kwenzeka, udinga ukuqonda izigaba eziyinhloko zokulala.
Isayensi iveza izigaba ezimbili zokulala: esebenzayo futhi ihamba kancane. Bahamba phakathi komunye nomunye kumaminithi angamashumi ayisithupha. Umjikelezo womsebenzi ubonisa umsebenzi wokucubungula izinqubo, okuvezwe ekubonisweni okulandelayo:
Smile ebusweni bomntwana.
Ukuhamba kwamehlo ngaphansi kwamajwabu amehlo noma ukuvula isikhathi esifushane.
Ngalesi sikhathi lapho umntwana ekhala ephusheni, engavuki. Kukhona ukucutshungulwa kwamangqamuzana omzimba welwazi olutholiwe ngesikhathi sokuvuka. Ebona izenzakalo zosuku, ingane iqhubeka isabela kubo. Ukukhala kungasabela ekuhlangeneni kokwesaba, umuzwa wedwa, ukukhathazeka ngokweqile.
Ngesikhathi sokulala kancane - ejulile-ingane ileleka ngokuphelele, ibuyisela amandla asetshenzisiwe, futhi iveza i-hormone yokukhula.
Ukuvuka noma cha?
Ukukhala, ukukhala okuthulile nokukhala ngesikhathi sesibindi sokulala kuyinto evamile. Ingane ikwazi ukubona amaphupho abonisa ukubonakala kwosuku oludlule. Kodwa izinyembezi zezingane zingaba nencazelo eyodwa - isifiso esiyingqayizivele sokuhlola ukuthi uphephile noma angashiywa ngumama. Uma kungekho ukuqinisekiswa kwalokhu, ingane ingavuswa ngempela futhi iqhume izinyembezi ngenxa yangempela. Yini abazali okufanele bayenze uma umntwana eqala ukukhala ephusheni?
Ungavusanga umntwana uma ehlaba izinyembezi futhi ekhishwa kancane ngamaphupho. Kuzodingeka afunde ukuthola ukukhathazeka futhi ajwayele ukuba yedwa ebusuku.
Ukuze ugqozi ukuthula kwengqondo kwengane, kungenzeka ngesizo lokubambezela okuncane, i-dummy noma ukukhuluma ngokuthula, ukuhlabelela umsindo ngokuzwakalayo. Isibonelo, "tshshsh."
Kuyafaneleka ukucula ngokuthula noma ukusho amazwi omculo we-lullaby omnene, ozosetshenziswa esikhathini esizayo ezimweni ezifanayo.
Ungagubha isikhalazo noma uthathe umntwana ezandleni zakho ngaphandle kokulimaza ubuthongo.
Izimbangela eziyinhloko zokukhala
Kungani umntwana ekhala ephusheni, uma ngesikhathi esifanayo evuka? Lokhu kusho ukuthi unikeza izimpawu, okufanele zihlolwe, ngoba akanakho enye indlela yokuheha. Abahlengikazi babelana ngezizathu eziyisikhombisa zokukhala kwezinsana. UDkt. Komarovsky uyabatshengisa, egcizelela lezi ezintathu eziyinhloko:
I-Instinct ihlotshaniswa neqiniso lokuthi ingane ayikwazi ukuhlala yedwa. Uzokhala uma ephethe ukwesaba okukhulu ukuthi ushiye umama. Kusenganeni (kuze kube unyaka owodwa), ukukhulumisana ngokuqondile naye kuyisenzo esiholela phambili, ngenxa yokuthi usana luya phambili luye lwashintshela ezingeni elisha lokufaneleka.
Izidingo zomzimba ezingavumelani (indlala, ukoma, ukuhlunga, ukuchama, ukulala).
Ubuhlungu futhi (noma) abuhlungu. Ingane ingase ihlupheke ngokushisa, ukufudumala, izingubo ezingenakuzwakala, ukungcola. Ubuhlungu bubangelwa ukuqoqwa kwegesi esiswini, izimbangela zazo ezimbili: ukudla nokudla ngokweqile (ukuntuleka kwamanzi). Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, umntwana uvele ngokukhala ngokuphupha ephupheni lobuhlungu obukhulu. Isibonakaliso sokuqala salokhu yisifiso sokubeka umlenze emlonyeni wakhe.
Kunezizathu eziningi, kodwa kanjani ukuqonda ukuthi yiluphi uhlobo lwezinyembezi obangela umntwana? Indlela kuphela ukuhlaziya izenzo, emva kwalokho ukukhala kuphelile. Kufanele uqale ngokukhomba izimbangela zokungahambi kahle. Ngokuvamile kwenzeka: ngesikhathi sokuvuka ingane iphazamiseka kulokho okubangela ukuphazamiseka kuye. Isibonelo, usika i-rubber. Njengoba kuncipha emsebenzini, ukunganaki kuyafika phambili futhi kuvimbele ukulala. Uma ingane iyancipha ngemuva kokuba ithathwe ezandleni zayo, khona-ke isisulu sisebenze. Kulolu daba, kunezimpikiswano eziningi: kulungile yini ukusabela uma umntwana ekhala iphupho ngenxa yokwesaba isizungu?
Kukhona odokotela abantwasawoti abathi kubalulekile ukukhala kancane kwengane: amaphaphu ahlakulele, iphrotheni ezinyembezini ezinomphumela we-antimicrobial, ungena nasopharynx. Lokhu kuveza ukuvikelwa kokulwa nokutheleleka komzimba. Abanye abazali babiza ingane ukuthi ibe yinkampani encane futhi bazame ukumfundisa, ngamabomu engaphenduli ngokukhala futhi engayithathi. Ingabe lokhu kulungile?
Izazi ze-neurologists zikholelwa ukuthi usana alukwazi ukuphatha kahle isimo, futhi impendulo ikhona kwelinye indiza. Izingane ezikhuliswe kusukela ekuzalweni ezikhungweni zikahulumeni, zikhala kakhulu. Akekho omuntu ozofaka isikhalazo ekubhenxweni kwabo. Zizikhiya futhi ziyeke ukuthemba. Lokhu kuholela ekuphazanyeni kwentuthuko - isibhedlela. Uma owesifazane omncane ekhala ebuthongweni bakhe, ungesabi ukumbamba. Isidingo sokukhathazeka nokukhathalela yisidingo esibalulekile somntwana wonyaka wokuqala wokuphila.
Yini okufanele ixwayise?
Isistimu yezinzwa yengane kuze kube yilapho ivame ukugula ngenxa yokugula: ukukhulelwa, ukubeletha okunzima, ukutheleleka kwe-intrauterine kanye nokulimala. Ngokuhambisana nezinye izimpawu, ukulala okukhathazayo kungabonisa izinkinga zezinzwa noma ezengqondo. Njalo ngemva kwezinyanga ezintathu, i-neurologist ihlola ingane, ihlolisise ukuthuthukiswa kwayo. Kufanele abe nesithakazelo ekutholeni impendulo yombuzo wokuthi kungani umntwana ekhala ephusheni ezimweni ezilandelayo:
Uma lokhu kuhambisane nokugula okuqhubekayo kokulala (ukuphazamiseka kokulala, ukulala okungenasisekelo noma ukulala ngokwanele).
Uma ukukhala okubukhali, ukukhala okubuhlungu kuphindaphindiwe njalo.
Uma abazali bengenakuzimela ngokuzimela ukuthi kubangelwa yini.
Uma umntwana ekhala, engavuki, isizathu - ezimweni zephupho lomntwana. Uma izinyembezi zihlotshaniswa nokuguqulwa kwesigaba esiphuthumayo, khona-ke ingane ibonisa ukuthi kunezinkinga, ngoba isisombululo sokuthi ukungenelela komuntu omdala kuyadingeka.
Ungabheka kanjani ukuzalwa kabusha? Amathiphu nolwazi oluwusizo
Ukuze lokho ngezinhloso okuhloswe ibalazwe indawo. Kanjani ukwakha Ibalazwe
Ixhuma ikhompyutha ku-TV